ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီ မပျက်စီးအောင် ဘယ်လိုချက်ပြုတ်သင့်ပါသလဲ? | OnDoctor
ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီ မပျက်စီးအောင် ဘယ်လိုချက်ပြုတ်သင့်ပါသလဲ?
By OnDoctor Editor	 On Jul 30, 2020 Last updated Aug 4, 2020
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် အာဟာရဖြစ်စေနိုင်သော သဘာဝဓာတ်ပစ္စည်း များစွာပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော် သင်ဘယ်လို ၀ယ်တယ်၊ သိုလှောင်တယ်၊ ပြင်ဆင်တယ်၊ ချက်ပြုတ်တယ် အပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ရဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အခုလို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ covid-19ကျရောက်‌နေချိန်မှာကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက်ပိုပြီး ထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဗီတာမင်စီ သည် ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ပြီး ရောဂါပိုးတိုက်ထုတ်ရာမှာ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်စီ က ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကို မြှင့်တက်စေပြီး ရာသီတုပ်ကွေး အပြင် အခြားသော နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဖျားနာခြင်း နဲ့ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော အစရှိတဲ့ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဗီတာမင်စီ ကောင်းမွန်စွာရရှိရန် ဘယ်လိုချက်ပြုတ်စားသောက်ကြရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီ မပျက်စီးအောင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် အချက်များ အနေနဲ့
၁။ ဖုန်၊သဲ ပြောင်အောင် ရေအရင် ဆေးပါ။
၂။ ရေဆေးပြီးမှ လှီးပါ။
၃။ အရွယ်အစား ခပ်ကြီးကြီး လှီးပါ။
၄။ လှီးပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းချက်ပါ။(လေသလပ်ခြင်းကလည်း အာဟာရဓာတ်များကို ဓာတ်ပြယ်စေပါတယ်)
၅။ ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ ရေနည်းနည်းပဲ ထည့်ပါ။
၆။ ချက်ပြုတ်ချိန် နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါစေ။
ချက်နည်းပြုတ်နည်းတွေထဲမှာတော့အောက်ပါ နည်း ၂ သွယ်က တခြားနည်းတွေထက်အာဟာရဓာတ် ပျက်စီးခြင်းကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
၁။ Steaming (ခေါ် ) ပေါင်းနည်း
ဆီနဲ့ကြော် ရေနဲ့ပြုတ်တာတို့နဲ့ မတူဘဲ အစားအစာကို ရေနွေးငွေ့ပူပူနဲ့ ထိတွေ့ပြီး ကျက်စေတဲ့ ချက်ပြုတ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Stir-frying (ခေါ်) မွှေကြော်နည်း
ဆီခြောက်ခြောက်ကို မီးပြင်းပြင်းနဲ့ ဒယ်အိုးပေါ်မှာ မွှေလိုက် ကော်လိုက် တော့လိုက်နဲ့ အားရပါးရ ကြော်တဲ့ တရုတ်ရိုးရာဟင်းချက်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပြီးကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါမှ အမြန်ဆုံးကျော်လွှားနိုင်ပါစေ။
Author : Dr. Wallace K
ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့ရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?
မှန်ကန်သော အိပ်စက်ခြင်းပုံစံက ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုပါသလဲ?
မှန်ကန်သော အိပ်စက်ခြင်းပုံစံက ကျန်းမာရေးကို…